5 aragti oo ku saabsan jaceylka - sirta cilmu-nafsiga
Home Aragti-doon 5 aragti oo ku saabsan jaceylka – sirta cilmu-nafsiga
Nooca jaceylka ku haya iyo waxa uu yahay halkan ka ogow.
Aragtida jaceylka. PHOTO: Unsplash
Muxuu dadka u galaa jaceyl? Muxuu jaceylka qaar u raagaa midna dhaqso u baaba’aa? Dhakhaatiirta Cilmu-nafsiga iyo baareyaal ayaa soo jeediyay dhowr aragti oo kala duwan oo sharaxaya qaababka jaceylka iyo adkeysigiisa.
Jaceylka waa dareen iska caadi ah, balse fahamka sida iyo sababta uu u yimaado, way adag tahay in la fahmo.
Sida dhabta ah, muddo dheer waxaa la aaminsana in Jaceylka uu yahay wax fudud, aasaas ah, mucjiso ah, ayna adag tahay in si buuxda loo fahmo.
Afarta arrimood ee soo socda waa aragtiyada ugu waaweyn ee lagu sharaxayo jaceyl iyo waxyaabaha dareenka ah ee ku lamaanan:
Ka helidda iyo Jaceylka
Dhakhtarka ku taqasusay Cilmu-nafsiga, Zick Rubin, wuxuu soo jeediyay in Jaceylka (romantic) wuxuu ka kooban yahay seddax arrimood:
Isu soo dhowaansho
Rubin wuxuu aaminsan yahay in mararka qaar ay dadka dareemaan farxad iyo mahdin ballaaran. Qofka wuxuu jeclaanayaa in uu wakhti badan la qaabo oo uusan ka fogaanin qofka uu jecel yahay, balse taas ma noqon karto jaceyl, mararka qaar.
Arrintaas waxay noqon kartaa ka-helid, sida uu sheegay Rubin.
Jaceylka wuu ka qoto-dheeryahay sidaa, wuuna ka xamaasad badan yahay. Waxaa qeyb ka ah rabitaan iyo isu soo dhowaansho jir-ahaaneed iyo xiriir.
Dadka iska-hela waxay isla qaataan wakhti, balse kuwa is jecel way is daryeelaan, waxayna isu buuxiyaan baahiyahooda.
Isku-xirnaanta dhanka qalbiga, waa rabitaanka ah daryeel, is ogolaansho iyo isu soo dhowaansho. Waa qiimeynta aragtida iyo farxadda qofka kale iyo wadaagidda dareenka qalbiga.
Jaceylka naxariista iyo xamaasadda
Sida ay sheegtay Elaine Hatfield oo ah dhakhtar Cilmu-nafsi, waxaa jiro laba arrimood oo aasaas u ah Jaceylka:
Jaceylka naxariista ah
Jaceylka Xamaasadda ah
Jaceylka Naxariista ah wuxuu ku saleysan yahay is-xushmeyn, isku-xirnaan, kalgaceyl, iyo is-aaminaad. Waa jaceyl dhaliya is-faham iyo in la is xushmeeyo.
Balse Jaceylka xamaasadeysan, waa rabitaanka-galmo, ama xanaaqa, walwalka iyo kalgaceylka isla socda. Marka waxyaabahaas ay meesha ka baxaan, qofka wuxuu dareemayaan farxad iyo qanaaco. Balse haddii taas ay dhici waydo, qofka wuxuu noqonayaa mid jahwareersan oo niyad-jabsan.
Jaceylka u sameysan sida taayerka ama shaagga gaariga
Buug la qoray sannadkii 1973 oo magaciisu ahaa ‘Midabka Jaceylka’ oo uu qoray John Lee oo cilmu-nafsiga ku taqasusay, wuxuu ku sheegay midabka taayarka.
Wuxuu jaceylka ku sheegay in uu leeyahay seddax midab oo aasaas ah. Waa kuwan:
Eros: Waa erey ka yimid luqadda Giriigga – Micnihiisu waa “xamaasad” ama “kacsanaan”. Lee wuxuu sheegay in jaceylka uu yahay mid jir-ahaaneed iyo mid dareen.
Ludos: Waa erey kale oo Giriig ah oo micnihiisu yahay “ciyaaraha geemka.” Waa arrin ah xanuun iyo farxad – balse aan halis ahayn. Dadka isu qaba jaceylka noocan ah go’aan wanaagsan ma lahan, waxayna walwal ka qabaan isu soo dhowaanshahooda.
Storge: Markale waa erey Giriig ah oo micnihiisu yahay “kalgaceyl dabiici ah”. Kani waa jaceylka dhexmara waalidiinta iyo carruurtooda iyo carruurta ay sii dhalaan. Sidoo kale waa jaceylka u dhexeeya saaxiibbada.
Aragtida jaceylka seddax-geesoodka ah
Dhakhtarka Cilmu-nafsiga ku taqasusay Robert Sternberg, wuxuu sheegay in jaceylka seddax-geesoodka ah oo ka kooban yahay seddax arrimood oo isku xiran:
Isku soo dhowaansho
Ka go’naansho (Fulinta ballanqaadka)
Isku darka seddaxdan arrimood waxay dhalisaa noocyo kala duwan oo jaceyl ah. Tusaale ahaan, Isku darka go’aanka iyo isku soo dhowaanshaha, waxaa ka dhasha Jaceylka-Naxariista ah, halka isku darka Xamaasadda iyo isku soo dhowaanshaha uu ka dhasho “romantic love”.
Previous article12 dabeecad oo uu leeyahay qofka deggan
Next articleMa isku kalsoontahay? Sida niyadjabka iyo kalsooni darada looga caafimaado